ချစ်စရာကောင်းတဲ့ သမီးလေးရဲ့ လှုပ်ရှားမှုပုံရိပ်တွေကို ဗီဒီယိုလေးရိုက်ကာ မှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ မေမေခင်လွှမ်း – Cele Posts
ချစ်စရာကောင်းတဲ့ သမီးလေးရဲ့ လှုပ်ရှားမှုပုံရိပ်တွေကို ဗီဒီယိုလေးရိုက်ကာ မှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ မေမေခင်လွှမ်း
ပရိသတ်ကြီးရေ မင်းသား စည်ဖြိုးနဲ့ မော်ဒယ် ခင်လွှမ်းတို့ရဲ့ တစ်ဦးတည်း သော သမီးရတနာလေး မွေးဖွားတာ တစ်လပြည့်သွားခဲ့ပါပြီနော်။ တစ်လသမီးလို့ မထင်ရလောက် ကို ဝတုတ်လေးနဲ့ ချစ်စရာကောင်းနေပြီး မြင်သူတိုင်း အချစ်ပိုနေကြတာပါနော်။
သမီးလေး တစ်လပြည့်တဲ့နေ့မှာ shandra ရဲ့ ဗီဒီယိုနဲ့ ဓာတ်ပုံတွေကို မေမေခင်လွှမ်းက တင်ပေးလာ ပါတယ်နော်။ ဒီခေတ်ကြီးထဲမှာ ကလေး တစ်ယောက်ကို ပြုစုစောင့်ရှောက် ရတာ ပင်ပန်းကြောင်းကိုလည်း ခင်လွှမ်းတစ်ယောက်ပြောပြထား ပါသေးတယ်နော်။
” Shandra လေး ၁လပြည့်ပါပြီ . ဒီလိုခေတ်အခါကြီးမှာ ကလေး တစ်ယောက်ကို ပြုစုရတာ ရင်တမမနဲ့ပါပဲ 😥#Shandrainmyheart” လို့ ရေးထားပါတယ်နော်။ မြင်သူတိုင်း အသည်းယားပြီး ချစ်သွားစေမယ့် shandra လေးအတွက် မွေးနေ့ဆုတောင်း ပေးသွားကြပါဦး ပရိသတ်ကြီးရေ…
ခဈြစရာကောငျးတဲ့ သမီးလေးရဲ့ လှုပျရှားမှုပုံရိပျတှကေို ဗီဒီယိုလေးရိုကျကာ မှတျတမျးတငျထားတဲ့ မမေခေငျလှမျး
ပရိသတျကွီးရေ မငျးသား စညျဖွိုးနဲ့ မျောဒယျ ခငျလှမျးတို့ရဲ့ တဈဦးတညျး သော သမီးရတနာလေး မှေးဖှားတာ တဈလပွညျ့သှားခဲ့ပါပွီနျော။ တဈလသမီးလို့ မထငျရလောကျ ကို ဝတုတျလေးနဲ့ ခဈြစရာကောငျးနပွေီး မွငျသူတိုငျး အခဈြပိုနကွေတာပါနျော။
သမီးလေး တဈလပွညျ့တဲ့နမှေ့ာ shandra ရဲ့ ဗီဒီယိုနဲ့ ဓာတျပုံတှကေို မမေခေငျလှမျးက တငျပေးလာ ပါတယျနျော။ ဒီခတျေကွီးထဲမှာ ကလေး တဈယောကျကို ပွုစုစောငျ့ရှောကျ ရတာ ပငျပနျးကွောငျးကိုလညျး ခငျလှမျးတဈယောကျပွောပွထား ပါသေးတယျနျော။
” Shandra လေး ၁လပွညျ့ပါပွီ . ဒီလိုခတျေအခါကွီးမှာ ကလေး တဈယောကျကို ပွုစုရတာ ရငျတမမနဲ့ပါပဲ 😥#Shandrainmyheart” လို့ ရေးထားပါတယျနျော။ မွငျသူတိုငျး အသညျးယားပွီး ခဈြသှားစမေယျ့ shandra လေးအတှကျ မှေးနဆေု့တောငျး ပေးသှားကွပါဦး ပရိသတျကွီးရေ…
ဆေးခန်းလာပြတဲ့ လူနာတွေကို အားဆေးတွေအခမဲ့ လှူဒါန်းပေးရင်း ကုသိုလ်ပြုခဲ့တဲ့ ပွင့်နဒီမောင်
ဒီကနေ့မှာပဲ မိသားစုနဲ့ချစ်ရတဲ့ပရိသတ်တွေကို အပြီးတိုင်နှုတ်ဆက်ခွဲခွာသွားပြီဖြစ်တဲ့ ဝါရင့်သရုပ်ဆောင် မင်းသားကြီး ဦးလူမုန်း